नेता जि हरु व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब , हजुरहरु प्राडो , पोजेरो मात्र चड्ने कहिले सम्म? - Suvham News
August 21, 2017 by gsmktm
पहाडमा मासिनहरुले सबैभन्दा धेरै ६.४ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि व्यहोरेका हुन् । काठमाडौंमा मूलय वृद्धि दर ३.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
Prev३३ किलो सुन काण्डका मुख्य आरोपी राजनप्रसाद पन्थ को हुन?
Nextकाभ्रेबस व्यवसायि सँघका बसहरुमा गुण्डा गर्दि बढ्दो दिन दहाडै यात्रु ठगिदै , चोरिका घटनमा वृद्दि